Rugby – «Silver cup 2017» : hiady tsy ho gisitra ny Makis sy i Botsoana | NewsMada
Rugby – «Silver cup 2017» : hiady tsy ho gisitra ny Makis sy i Botsoana
Ho fantatra, amin’ity asabotsy ity, ny ho tohin’ny lalan’ny Makis de Madagascar eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Silver cup 2017”. Hiady tsy hivarina sokajy mantsy ny Malagasy, amin’izany.
Hifampitana eo amin’ny fiadiana ny laharana fahatelo, amin’ny “Silver cup 2017”, ao anatin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (1B), ny Makis de Madagascar sy i Botsoana, amin’ity asabotsy ity. Fihaonana, atao amin’ny kianja COC Casablanca, Maraoka. Hanan-danja io lalao io satria midina any amin’ny sokajy 1C ny resy amin’ireo firenena roa tonta ireo.
Anio, amin’ny 5 ora 30 eto Madagasikara, ny hanatontosana ny lalao. Araka izany, tsy maintsy hiady mafy ny Makis de Madagascar, mba hijanonana ao anatin’ity “Silver cup” ity, ho an’ny taom-pilalaovana manaraka. Vonona ny mpilalao malagasy hiatrika izany ary efa tafarina ny toe-tsain’ny tsirairay, taorian’ny faharesena nanoloana an’i Maraoka, teo amin’ny manasa-dalana.
Efa nanitsy ireo lesoka, tamin’izany lalao izany, koa Razily, mpanazatra ny Makis de Madagascar. Tsy mbola fantatra ny mety ho firafitry ny mpilalao 15 hiakatra kianja voalohany. Asa na ho tazonin’ny mpanazatra ihany ireo nilalao voalohany, tamin’i Maraoka, na hiova izany.
Raha ny fahitana an-dry zareo Botsoaney aloha, azon’ny Makis resena tsara. Manantombo kely ry zareo amin’ny vatana saingy mbola mitavozavoza amin’ny lafiny teknika, ka mety hoverezin’ny Makis. Na izany aza, ilàna fahamailoana hatrany ity lalao ity, satria efa nijery ny lalaon’ny Makis koa ry zareo, ary tsy maintsy efa manomana paikady hafa. Marihina fa anisan’ny lesoka ho an’ny mpilalao malagasy ny tao anaty “pack d’avant”, tsy nanohitra mihitsy, nandritra ny lalao tamin’i Maraoka. Teo koa ny fakana “touché”, izay matetika lasa tombony ho an’ny mpifanandrina.
Hiady ny famaranana, hiakarana any amin’ny “Gold cup”, kosa i Maraoka sy i Côte d’Ivoire.